पूर्वराजाको लखनउ भ्रमणको चर्चा अद्यापि जारी छ । त्यसो त राजा भइसकेपछि उनले पहिलो पटक कुनै विदेशी नेतासँग यसरी औपचारिक भेट गरेका हुन् होला, जसरी अहिले भारत, उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई भेटेका छन् । पूर्व राजा भइसकेपछि पनि भारतीय, चिनियाँ र अन्य विदेशीहरुसँग भेटेका थिए तर योगी आदित्यनाथसँगजस्तो औपचारिक अन्य कोहीसँग भेट भएको थिएन भनेर भनिदैछ ।
अव समाचारमा त पूर्वराजालाई लखनउ स्थित आफ्नो आवाशमा भेट गर्नुअघि मुख्यमन्त्री योगीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र विदेश राज्यमन्त्री भीके सिंहसँँग सल्लाह गर्नु भएको थियो भनेर बताइएको छ । नेपालको मध्ये पश्चिमको भ्रमणमा रहेको पूर्वराजाले सडकमार्ग हुँदै अकस्मात उत्तर प्रदेशको राजधाी लखनउ पुगेका होइनन् भन्न् जमात धेरै नै छ । पूर्व लखनउ जाने प्लान पहिले देखि नै हुनुपर्छ, एकजना राजावादी खुशी हुँदै यसो भन्छन् ।
त्यसो त कट्टर हिन्दुवादी भनेर चिनिएका योगी आदित्यनाथले खुलेआम पूर्वराजाका इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न सहयोग गर्छु भनेका त छैनन् । तर पनि यहाँका राजावादीहरुलाई केही न केही आश चैं छ योगी आदित्यनाथसँग ।
अझ नेपालमा अनपेक्षित रुपमा चर्च र मदरशाहरुको बुद्धि हुन थालेपछि चिन्तित यहाँका राजाहरु मोदी र योगीबाट धेरै नै आशान्वित छन् । त्यसो त यो लखनउ भ्रमण कांग्रेसका खुमबहादुर खड्का र श्री श्री श्री रविशंकरको सतप्रयासमा सम्भव भएको हो भनेर ज्ञान छाँटनेहरुलाई योगी आदित्यनाथसँग पूर्वराजाको सम्बन्ध आजको होइन, योगी गोरखपुरको मठाधीश मात्र हुँदै गरेको बेलादेखि हो भनेर केहीले मुखमा बुझो लगाइदिएका छन् ।
मध्यपश्चिममा अपार जनसमर्थन पाएर लखनउ पुगेका पूर्वराजा फर्किसकेका छन् भने युवराज्ञी हिमानी स्वास्थ्योपचारका लागि अहिले थाइलेण्ड पुगेकी छिन् । उडन्ते गफमा रमाउनेहरु त हिमानी शाहसँगै बैंककमा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र दिल्लीबाट बैंकक पुगेका भनिएका भारतीय रअका प्रमुख धसमानियावीच वार्ता भएको, अव चाँडै नै नेपाली राजनीतिमा फेरबदल हुने जस्ता हावा उडाइरहेका छन् । उडन्ते गफ नै हो, माघ ७ गते पूर्वराजा राजदरवार पुगेर श्रीपेच पहिरिदैछन् । यो कुरा राजतन्त्रलाई अझ बदनाम गराउन फिजाइदै छ । पूर्वराजा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भारतको शरणमा पुगे भन्ने बदनामी गराउन खोजिएको समाचार हुन् यी । बैंककमा चिनियाँहरुसँग समेत हिमानी शाहले भेटवार्ता गर्ने हल्ला उडाइएको छ ।
नेपालको वर्तमान गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था धर्मराइसकेको छ । एउटा गतिलो प्रहारको मात्र जरुरी छ । सत्य यही हो । यो व्यवस्था रहदैन, चरित्रहीन नेतृत्वका कारण । जसरी हिजो तामझामका साथ यो व्यवस्था स्थापना गरियो, त्यो त केही व्यक्तिहरुलाई सत्राको मोजमस्ती गर्नका लागिमात्र शिद्ध भएको छ ।
राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, सामाजिक सद्भाव खलबलिएको छ, मौलिक संस्कृति माथि प्रहार भएको छ । विकास निर्माण, प्रशासन, सुरक्षा निकायसमेत भ्रष्टाचारमय बनेका छन् । राजनीतिमा माफियाकरण भइसकेको छ । विकासको नाममा विध्वंशमात्र भएको छ । पुराना योजनाहरु बल्लतल्ल सकाएर आपूले जस लिने होड चलेको छ । विदेशमा नेपाल र नेपालीहरुको साख गिराउने काम गरिएको छ । नेपाललाई मित्रराष्ट्रहरु विरुद्ध खेल्ने मैदान बनाइएको छ । अव गणतन्त्रवादीहरु माथि आरोप नै लगाउने हो भने त, एउटा पुस्तक नै तयार हुनजान्छ । चारैतिर असन्तुष्टि व्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा एउटा दह्रो नेतृत्व अगाडि आएर जनतालाई गोलवद्ध गर्न सकेमा यी नेता र यो शासन व्यवस्थाको खैर छैन । लाग्छ, अव समय आइसकेको छ । गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरेपक्षता जस्ता नेपाल र नेपाली विरुद्धका कुराहरु थोपर्नेहरुका विरुद्ध सशक्त ढंगले मैदानमा उत्रनका लागि ...अव यो सही समय हो जस्तो लाग्छ, गणतान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षधरहरु समेत चिढिएका बेला तिनलाई समेत राष्ट्र र राष्ट्रियता को पाक्षमा तान्ने त्यसका लागि पूर्व राजा नै खुलेर आउनुपर्छ भन्ने जमात बढ्दो छ । मध्य र सुदूरपश्चिमको भ्रमणबाट यो स्पष्ट हुनपुगेको छ ।
धार्मिक भ्रमणबाट जनताको भेउ बुझिसकेका पूर्वराजाले अव आह्वान गर्लान् त ? कुनै विकल्प नपाएर बाध्य भइृ कांग्रेस, एमाले अनि माओवादी केन्द्रलाई नै स्वीकार गर्नुपर्ने स्थितिबाट नेपाली जनतालाई पूर्वराजाले उन्मुक्ति देलान् ? बुझौं, नेपाल र नेपालीहरुलाई अधिकार विहीन राजा होइन कि अधिकार सहितको राजा चाहिएको छ । यो भाँडतन्त्र, अनि छाडा नेताहरुलाई लगाम लगाउन अधिकार सहितको राजतन्त्र उपयुक्त हुन्छ, हाम्रा लागि ।
प्रजातन्त्र चाहिन्छ, छाडा गणतन्त्र होइन । एउटा दह्रो अभिभावक चाहिन्छ, न कि राष्ट्रघात र भ्रष्टचार गर्ने नेता । तसर्थ, नेपाली जनताको माँग के हो ? त्यो बुझिसकेका पूर्वराजाले अव केही न केही कदम उठाउलान् कि ?